1 aogositra -12 novambra: 14 ireo matin’ny pesta | NewsMada
1 aogositra -12 novambra: 14 ireo matin’ny pesta
Nanomboka ny 1aogositra ka hatramin’ny 12 novambra lasa teo, 14 ny olona voamarina fa matin’ny aretina pesta, araka ny vaovao nampitain’ny minisiteran’ny Fahasalamana, omaly. Sivy ireo tratran’ny aretina pesta miseho amin’ny arein-tratra ka namoy ny ainy, dimy kosa ireo matin’ny pesta atonditarina. Nahatratra 43 ireo olona voamarina fa nahitana trangan’aretina pesta tamin’ireo olona rehetra notilina. Pesta atodintarina ny34 ary pesta aretin-tratra ny sivy.
Amin’ireo olona 34 voamarina fa voan’ny pesta atodintarina ireo, 29 ireo efa manaraka fitsaboana eny anivon’ny tobim-pahasalamana. Ho an’ny pesta aretin-tratra, namoy ny ainy avokoa ireo voamarina fa nahitana ny tranga.
Ny distrika nahitana ireo trangan’aretina voamarina fa pesta: i Tsiroanomandidy, i Befotaka, i Manandriana, Ambatofinandrahana, i Midongy Atsimo, Ambalavao, Anjozorobe, Ankazobe, i Miarinarivo, i Moramanga, Ambositra, i Betafo ary i Faratsiho.
Manahy amin’ny fiparitahan’ny valanaretina pesta ny mponina eto Antananarivo satria ny mitobaka eny rehetra eny ny fako efa tao anatin’ny andro maromaro izay. Miezaka miasa andro sy alina ny kamiao fa tsy mahazaka betsaka. Voalaza anefa fa nahazo kamiao ampolony ny Samva avy any amin’ny minisiteran’ny Rano hanalana ny fako.